Iimpawu zeLapBook Pro, into entsha ephathekayo evela kuChuwi | I-Androidsis
UIgnacio Sala | | Izixhobo ze-Android, Ezinye izixhobo
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba inani elikhulu labavelisi baseAsia bafikelele njani kwintengiso yemfonomfono ukusinika ngaphezulu kweendlela ezinomdla kwiimpawu zesintu, ezinye zazo zine Ixabiso elikhulu ngexabiso. Kodwa bayenzile, nangona ibancinci, kwintengiso yeethebhulethi, apho umvelisi uChuwi eye waba ngumgangatho.
Ayiloxesha lokuqala, kwaye ayizukuba kukugqibela, ukuba kwi-Androidsis esithetha ngayo iipilisi ezenziwa ukuba zifumaneke kulo mvelisi, ekubeni Chuwi Hi9 Pro, Olunye ukhetho olungcono olulawulwa yi-Android namhlanje esinokulufumana kwimarike. Namhlanje sithetha ngolunye uluhlu lweemveliso zalo, ngakumbi Windows 10 iilaptops. Ndithetha ngeLapBook Pro.
UChuwi usebenze iinyanga ezimbalwa kwinto ezakuba yimbalasane yakhe entsha kwintengiso yeelaptop, ukubheja kwiLapBook Pro, ilaptop enomtsalane ongoyena isikrini esikhulu, esihlala kwi-90% ukusuka phezulu, uyilo olufana kakhulu nolo lufunyenwe kwiHuawei's MateBook X Pro okanye kwi-XPS 13/15 evela kumenzi waseMelika uDell.
UChuwi unciphise imiphetho ukuya kwelona liphezulu, ebonisa isakhelo se-0,6 cm kuphela, evumela ukuba inikeze umyinge wescreen se-90%. Ikhibhodi ibuyiselwe umva, eya kusivumela ukuba siyisebenzise kwimeko ephantsi okanye ebonakalayo yokungabikho kwezibane. Ngaphakathi, sifumana iprosesa ye-Intel Gemini ye-64-bit ene-cores ezine kwaye yenziwe kusetyenziswa inkqubo ye-14 nn. Le processor ishenxela kwi-2,4 GHz.
Ngokugcina, iLapBook Pro isinika umthamo we I-64 GB yokugcina i-EMMC ngenkxaso ye-M2SSD ihamba ne-4 GB ye-RAM. Ngaphakathi, uya kufumana Windows 10 kunye nohlobo lwe-Android luya kwenza ngokunjalo, nangona oku kungekaqinisekiswa ngumenzi.
Iscreen sokuchukumisa sisivumela ukuba sinxibelelane ngezandlaInonxibelelwano lwe-headphone ye-3,5 mm, i-USB-C 3.0 kunye nonxibelelwano lwe-Micro-HDMI. Ukuba ucinga ukuvuselela ilaptop yakho endala kwaye awucwangcisi ukuchitha imali eninzi, iChuwi LapBook Pro inokuba lukhetho onokucinga ngalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Iimpawu zeLapBook Pro, into entsha ephathekayo ye-Chuwi